ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ် အသုံးချတတ်ဖို့ ကေသမုတ္တိသုတ္တန်ကို ဟောပြတော်မူပါတယ်။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 8:23 PM No comments:
ရဟန်းတွေက ကိုရင်ရာဟုလာ အဝေးက လာနေတာကို မြင်ရင် တံမြက်စည်းနဲ့ အမှိုက်စွန့်ပုံးတွေကို အပြင်မှာ ပစ်ထားကြပါတယ်။ အဲဒီအခါ အခြားရဟန်းတွေက “ငါ့ရှင်တို့၊ ဒါကို ဘယ်သူ ချပစ်ထားတာလဲ”လို့ မေးတဲ့အခါ အရှင်ဘုရားတို့၊ ကိုရင်ရာဟုလာ ဒီနားက ဖြစ်သွားပါတယ်။ သူများ ချပစ်ထားတာလေလား လို့ အခြားရဟန်းတွေက ဖြေကြပါတယ်။ ကိုရင်ရာဟုလာက အရှင်ဘုရားတို့၊ ဒါကို တပည့်တော် မလုပ်ပါ ဘုရား လို့ တစ်နေ့မှ မပြောဘဲ အဲဒါတွေကို သိမ်းဆည်းကာ ရဟန်းတွေကို တောင်းပန်ပြီး သွားပါသတဲ့။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 8:21 PM No comments:
အရဟံ ဇယံ ဘုရားရှိခိုး(အံ့သြဘွယ်တန်ခိုးထူးဘုရားရှစ်ခိုး)
၁။ အရဟံ – ပူဇော်အထူးကို ခံယူတော် မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ-ရှိခိုးပါ၏ ဘုရား။
၂။ ဗဟိ အန္တဇယံ – အတွင်းအပရန်ကို အောင်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ-ရှိခိုးပါ၏ ဘုရား။
၃။ သုဂတံ – ကောင်းသောစကားကို ဆိုတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ-ရှိခိုးပါ၏ ဘုရား။
၄။ အမိတံ – မနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည့် တန်ခိုးပြာဋိဟာနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ-ရှိခိုးပါ၏ ဘုရား။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 8:18 PM No comments:
အာနာပါန အကျိုး ၅-မျိုး
၁။ အာနာပါန ကမ္မဋ္ဌာန်းကို စီးဖြန်းခဲ့ပါမူ ယခုခေတ်၊ ယခုကာလ၊ ယခုဘဝ၌ပင်လျှင် ရဟန္တာအဖြစ်သို့ ရောက်နိုင်၏။
၂။ အကယ်၍ အသက်ရှိစဉ် ရဟန္တာအဖြစ်သို့ မရောက်သေးပါမူ သေခါနီးကာလ၌ သမသီသိ ရဟန္တာအဖြစ်သို့ ရောက်နိုင်သေး၏။
၃။ အကယ်၍ သမသီသိ ရဟန္တာ မဖြစ်နိုင်သေးပါမူ နတ်ပြည်သို့ ရောက်သောအခါ ဓမ္မကထိကနတ်သား တရားသံကို ကြားရ၍ ရဟန္တာအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိနိုင်၏။
၄။ အကယ်၍ နတ်ပြည်၌ ရဟန္တာ မဖြစ်သေးပါမူ အရိမေတ္တယျဘုရား မပွင့်မီ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါ အဖြစ်သို့ ရောက်နိုင်သေး၏။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 8:16 PM No comments:
မမေ့မလျော့ရှိပြီး ပွားများရမည့် ကုသိုလ်တရားလည်း (၁၀)ပါး ရှိလေ၏။ ထိုကုသိုလ်တရား (၁၀)ပါးကို စာရိတ္တအကျင့်တရား-ဟုလည်း ခေါ်လေသည်။ ပုညကိရိယာဝတ္ထု-ဟုလည်း ခေါ်၏။ ထို(၁၀)ပါးကား - (၁) ဒါန – စွန့်ကြဲပေးကမ်း လှူဒါန်းခြင်း၊
(၂) သီလ – (၅)ပါး၊ (၈)ပါး အစရှိသည့် ရှောင်ကြဉ်မှုများကို စောင့်ထိန်းခြင်း၊
(၃) ဘာဝနာ – သမထ၊ ဝိပဿနာ ကမ္မဋ္ဌာန်းများ အားထုတ်ခြင်း၊
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 8:14 PM No comments:
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 8:12 PM No comments:
ကံပြုတဲ့နေရာမှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုရင် စေတနာပါ။ ဒါကြောင့် မြတ်စွာဘုရားက “စေတနာဟံ ဘိက္ခဝေ ကမ္မံဝဒါမိ၊ ရဟန်းတို့ စေတနာကို ကံလို့ ငါဘုရား ဟောတယ်”လို့ မိန့်ကြားထားတာပါ။ အဲဒီ စေတနာနဲ့ကံ၊ ကံနဲ့ စေတနာ ဘာထူးသလဲမေးရင် ပြုလုပ်ဆဲ အမှုတွေဟာ စေတနာပါ။ ပြီးပြီးသွားတာက ကံပါ။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 8:09 PM No comments:
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့သည် မိမိတို့၏ နေအိမ်တွင် မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ဓာတ်တော်မွေတော်နှင့်
ကိုယ်တော်စား ရုပ်ပွားဆင်းထုတော်များကို ထားရှိ ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ အချို့ဆိုလျှင် ရိုသေ
လေးစားအပ်သည့် နာမည်ကြီး ဘယ်ဆရာတော်က ဓာတ်တော်ကျသည်၊ ဘယ်ဆရာတော်ကြီးက
တော့ နာမည်ကြီးပေမယ့် ဓါတ်တော်မကျဘူး ဟူ၍ပင် ငြင်းခုံလေ့ ရှိတတ်ကြပါသည်။ ဆရာတော်
ကြီးများနှင့် ရဟန္တာတို့၏ ဓာတ်တော်ဟူသည် အဘယ်သို့သော အရာမျိုးနည်း။ ဆရာတော်ကြီး
တစ်ပါး ပျံလွန်တော်မူသဖြင့် မီးသင်္ဂြိုဟ်ရာတွင် အတုံးအခဲများ ကြွင်းကျန်သည်ကို ဓာတ်တော်
ကျသည်ဟု ဆိုလေ့ရှိကြသည်။ ရဟန္တာဓာတ်တော်ဟူသည် အဘယ်သို့သော အရာဖြစ်ကြောင်း
ဆဌသင်္ဂီတိပု စ္ဆက အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ ကျေးဇူးတော်ရှင် မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးက ဤ
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 8:08 PM No comments:
ဒီတစ်ပတ်တော့ စာဖတ်သူတွေကို ဗဟုသုတ တိုးပွားပါစေခြင်း အကျိုးငှာ ဆရာတော် ဦးဗုဓ် ရဲ့ သိကောင်းစရာ ဆုံးမစာများကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။
ဘ၀ရဲ့ ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းတွေကို စာဖတ်သူတို့ စံနမူနာ အတုယူနိုင်ကြပါစေ ။ ဘ၀တိုးတတ်ခြင်းအတွက် မကောင်းသော အကျင့်ဆိုးဝါသနာဆိုးများကို
အကျိုးအပြစ်အလိုက်ဆင်ခြင်နိုင်ပြီး မြင့်မားတဲ့ဘ၀ကိုပိုင်ဆိုင် နိုင်ပါစေ ။ စာပေကိုလေ့လာဖတ်ရူ့ရသော ကြောင့်လည်းကောင်းမြတ်အဘိုးတန်သော အမြင်
များကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ ။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 8:05 PM No comments:
လူမိုက်အမှု၊ ငါပြန်ပြုလျှင်၊ သူလိုငါလည်း၊ လူမိုက်ပဲဟု၊ စိတ်ထဲတွေးဆ၊ အေးမြမြနှင့်၊ ဒေါသမထွက်၊ စိတ်မပျက်၊ သက်သက် အနာခံသတည်း။
“ငါ့အပေါ်၌ လူမိုက်ပြုသော စော်ကားမှုကို ငါက ပြန်ပြုလျှင် ငါလည်း သူ့လိုလူမိုက် ဖြစ်မှာပဲ” ဟု စိတ်ထဲမှာ တွေးဆ၍ ဒေါသမထွက်ဘဲ စိတ်ပျက် အားငယ်၍လည်း မနေဘဲ စိတ်အေးအေးနှင့် မိမိကသာ အနာခံလိုက်ခြင်းသည် ခန္တီပါရမီ၏ သဘောတည်း။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 8:03 PM No comments:
(၂၀၀၈-ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလထုတ် မြတ်ပန်းရဂုံတွင် ပါရှိသော ဘိက္ခုသုည၊ ဘားအံ-၏ မဂ္ဂင်ကိစ္စ မေးခွန်းသုံးပုဒ်ကို ဖြေကြားထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။)
မေး။ ။ နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုသော သူတော်ကောင်းများ၏ လောကုတ္တရာစိတ်တွင် မဂ္ဂရှစ်ပါး ပါဝင်ပါသည်။ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံသော စိတ်ကသာ နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဟု နားလည်ထားပါသည်။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 8:00 PM No comments:
သက်ဆိုင်ရာ ရောင်းရင်းအပေါင်း တို့အား လည်း ကောင်း။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အပေါင်းတို့အားလည်းကောင်း တကယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာ (ခေါ်) ဓမ္မ universal
law ဆိုတာကို အနည်းငယ် တီးခေါက်မိစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး
ကျွန်တော် ဒီစာကိုရေး လိုက်ရပါ တယ်ခင်မျာ-
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 7:58 PM No comments:
အသိဥာဏ်သည် ဦးနှောက်မှ စဖြစ်သလော နှလုံးသားမှ စဖြစ်သလော သုံးသပ်ကြည့်ခြင်း
စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်သော လူသား၏ အသိဥာဏ်သည် ဦးနှောက်မှ စ၍ဖြစ်ပေါ်လာ၏ ဟု ခေတ်သစ် သိပ္ပံပညာ က ဖော်ပြထားသော်လည်း ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကမူ အသိဥာဏ်သည် ဟဒယ၀တ္တု ( ခေါ်) နှလုံးသား ဖြစ်တည်ရာ ဟဒယ၀တ္ထုရုပ်မှ ဖြစ်ပေါ်လာ၏ ဟု အတိအလင်း ဖော်ပြထားရာ ကျွနုပ်ငယ်စဉ်က ဘယ်လိုမှ မဆုံးဖြတ်နိုင်ပဲ သံသယတန်းလန်းနှင့် နေခဲ့ရဖူး၏။ ဗုဒ္ဓ၀ါဒက အသေအချာ မှန်မည် ဟု စိတ်က လက်ခံချင် သော်လည်း ဘယ်ပုံ ဘယ်နည်း မှန်ကန်သည် စသည်ကိုတော့ လက်လှမ်းမမှီနိုင်ခဲ့ပေ ။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 7:53 PM No comments:
မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့သည် ဘာသာရေးကို အကြောင်းပြုလျက် ဘုရားပွဲ၊ ရှင်ပြုပွဲ၊ ရဟန်း
ခံပွဲ၊ ဘုန်းကြီးပျံပွဲတို့ကို ကျင်းပလာခဲ့ကြပါသည်။ ယင်းသို့ ဘာသာရေးကို အကြောင်းပြုပြီး ကျင်းပ
ပင် ကျင်းပကြငြားသော်လည်း ဘာသာရေးအရ ထိထိမိမိ အကျိုးဖြစ်ထွန်းရေးသို့ ဦးတည်ရှေ့ရှုမှု
အားနည်းခဲ့ကြသည်သာ များပါသည်။ ဘာသာရေးနှင့် မစပ်သော ပျော်ပွဲရွင်ပွဲ၊ အပိုပကာသန
ကိစ္စရပ်များကို ရှေ့တန်းတင်မှုများသာလျှင် လွှမ်းမိုးနေခဲ့ပါသည်။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 7:49 PM No comments:
တစ်ခုသော နေ၀င်ဖျိုးဖျ အကာလအချိန်မဲ့တွင်မှ ဆံပင်ဖားလျား အ၀တ်အစား အစုတ်အပြတ်နှင့်
ဒကာမကလေးတစ်ယောက် တောင်ဖီလာတောရကျောင်းဆီသို့အမောတကော ပြေးလာနေ၏။ ရုပ်ရည် သနားကမား၊ ရုပ်လက္ခဏာနှင့် အ၀တ်အစားသည် တစ်ခြားစီဖြစ်နေ၏။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 7:48 PM No comments:
တစ်ရံရောအခါ (သက္ကရာဇ်အားဖြင့် တစ်ထောင်ပြည့်နှစ်တွင်) နှစ်ပေါင်းများစွာ
ပျောက်ကွယ်နေသော မန်းစက်တော်ရာ နှစ်ဆူကို
ရှာဖွေရန် သာလွန်မင်းကြီးထံ စာသွင်းကြ၏။
မင်းကြီးလည်း သဘောကျသဖြင့် စက်တော်ရာ အရှာထွက်တော်မူခဲ့သည်။။
အနတ္တ ဓဇ ဆရာတော်၊ အရိယာလင်္ကာရဆရာတော်၊
တိလောကာ လင်္ကာရ ဆရာတော်တို့ လည်း အဖော်ပါကြ၏။ အင်းဝနေပြည်တော်မှ မင်းဘူးသို့ ကြွကာ တစ်တောဝင် တစ်တောင်ထွက် သက်တုံ တက်တုံ ရှာဖွေတော်မူကြ၏။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 7:45 PM No comments:
သမ္ဗာ ဓပ္ပဋ္ဋိန္နောသ္မီ ၊ တဿ မေ သရဏံ ဘ၀။
ရဲရင့်တည်ကြည် ဇာနည်မည်သော ကြီးမားသောလုံ့လရှိတော်မူသော ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရား၊ ရှင်တော်မြတ်ဘုရားအား နမော ရှိခိုးခြင်းဖြစ်ပါစေ။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 7:44 PM No comments:
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သူတော်စင်တို့ကြားမှာ မိဘက သားသမီး ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သားသမီးက မိဘကိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တပည့်က ဆရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ဦးဦးကို မေတ္တာဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊
သနားဂရုဏာဖြင့်သော်လည်းကောင်း ပေးကမ်း တတ်ကြပါသည်။ သံဃာတော်များကိုလည်း
ပစ္စည်းလေးပါး အစရှိသဖြင့် လှူဒါန်းတတ်ကြပါသည်။ လှူဒါန်း ပေးကမ်းရတာတွေ အများကြီး
ဖြစ်လာတဲ့အခါ ပေးရတဲ့အထဲမှာ ဘာပေးတာ ပိုကောင်းသလဲ။ ဘယ်ဟာက အကောင်းဆုံး
ပေးကမ်းခြင်းလဲ ဆိုတာ သိရှိနားလည်ဖို့ အရေးကြီးပါသည်။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 7:43 PM No comments:
လောသကတိဿသည် သာဝတ္ထိမြို့ထဲတွင်လှည့်လည်တောင်းသော်လည်း ရှေးယခင်ဘဣဿာ
မစ္ဆရိယဓာတ်ခံကြောင့် ပေးမည့်ကျွေးမည့်သူ တစ်ယောက်မျှ မရှိပေ။ အိမ်နောက်ဖေးတွင်အိမ်ရှင်မများ
လှမ်းပက်ထားသော အိုးဆေးရေ ခွက်ဆေးရေများထဲမှ တမင်းစေ့ကလေးများကို တစ်စေ့ချင်း လိုက်
ကဆုန် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ ထူးမြတ်သော ဘာသာရေးပွဲတော်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ နွေဥတု၏ အလယ်ဗဟို ကဆုန်လပြည့် နေ့၌ မဟာဗောဓိညောင်ပင်ကို ရေသွန်းလောင်းသောအားဖြင့် ဆင်ယင် ကျင်းပသော ပွဲတော်ဖြစ်သည်။
မြတ်ဗုဒ္ဓသည် မဟာသက္ကရာဇ် ၁၀၃-ခုနှစ် ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၌ သူ အမြတ်နိုးဆုံးဖြစ်သည့် သဗ္ဗညုတဥာဏ်တော်ကို ရရှိခဲ့သည်၊ ဤအကြောင်း ကို လယ်တီဆရာတော်ဘုရားက-
“ခါတော်တပုံ၊ ပွင့်ချိန်ကြုံက၊ ကဆုန် လပြည့် ဆင်မင်းနေ့ဝယ်၊ မြေ့ပရမေ၊ ပလ္လင်ဗွေထက် ရွှေညောင်တော်ကြီး၊ ဗိတာန် ထီးနှင့် စသည်ဖြင့် ခုနစ်နေ့ ဘုရားရှိခိုး လင်္ကာ၌ ဆိုခဲ့ စပ်ခဲ့ ရေးခဲ့သည်။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 7:40 PM No comments:
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 7:39 PM No comments:
သာသနာဟူသည် ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏ အဆုံးအမဖြစ်သည်။ ထိုအဆုံးအမ ဖြစ်သော သာသနာတော်သည် ပိဋကတ်သုံးပုံ၊ နိကာယ်ငါးရပ်၊ ဓမ္မက္ခန္ဓာပေါင်း ရှစ်သောင်းလေးေ ထာင် ဖြစ်လေသည်။ အကျဉ်းအားဖြင့်ဆိုလျှင် မကောင်းမှုဟူသမျှ မပြုရ၊ ကောင်းမှုမှန်သမျှ မရ-အရပြု၊ စိတ်ကို ဖြူစင်အောင်ထား ဟူ၍ ဖြစ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် မကောင်းမှုရှောင်၍ ကောင်းမှုပြုသူများကို သာသနာပြုသူ (တနည်း) ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏ အဆုံးအမကို လိ…ုက်နာသူ၊ အရှည်တည်တံ့အောင် လက်ဆင့်ကမ်း၍ စောင့်ရှောက်သူ ၊ ပြုသူဟုဆိုရမည် ဖြစ်ပေသည်။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 7:38 PM No comments:
” အဒိန္နာဒါနကံ အကြောင်း “
အဒိန္နာဒါန ဆိုတာ ဦးဇင်းတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ နေ့စဉ်စောင့်ထိန်းနေကျ ငါးပါးသီလရဲ့ဒုတိယမြောက်သိက္ခာပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာလိုရှင်းရှင်းလေးပြောရရင် အရှင်မပေးသော သူတစ်ပါးဥစ္စာကို ခိုးယူခြင်းမှ ရှောင်…ကြဉ်ရတဲ့သိက္ခာပုဒ်ပါ။ ရှောင်ကြဉ်ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်။ လွန်ကျူးရင် ဆိုးကျိုးရမယ်။
လွန်ကျူးလို့ရမယ့် အကျိုးတရား (၆)ပါးရှိပါတယ်။ ပိုင်ရှင်က ကြည်ဖြူစွာမပေးသော ပစ္စည်းကိုခိုးယူခြင်း၊ တိုက်ယူခြင်း၊ နှိုက်ယူခြင်း၊ အကြပ်ကိုင်ပြီးယူခြင်း၊ ပရိယာယ် တစ်မျိုးမျိုးဖြင့် လှည့်ပတ်ပြီးယူခြင်း စတဲ့ အချက်တွေဟာ အဒိန္ဒာဒါန- သူတစ်ပါးဥစ္စာပစ္စည်းကို မတရားယူခြင်းမည်ပါတယ်။ အဲလို အဒိန္နာဒါနကိုလွန်ကျူးရင်
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 7:35 PM No comments:
.” သတိထားဖွယ်ရာ အမျိုးသမီးများနှင့် ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ “
အမေး။ ။ ဥူးဇင်းဘုရား။ တပည့်တော်မ တစ်ခုလောက် လျောက်ထားချင်ပါတယ်ဘုရား။
တပည့်တော်မနဲ့ တပည့်တော်မရဲ့ သူငယ်ချင်းတို့ ကာမေသုမိစ္ဆာ အကြောင်းကို
… ဆွေးနွေးကြည့်ပါတယ်။ဒီဘက်ခေတ်မှာက စိုးရိမ်စရာတွေ မြင်နေမိလို့ပါ ဘုရား။
သူငယ်ချင်းကပြောပါတယ် ကျူးလွန်သူအိမ်ထောင်သည်သာလျှင် ကံထိုက်ပြီးတော့
တစ်ဖက်လူသည် ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိသူဆိုပါက ကံမထိုက်ဟု ဆိုပါသည်။
သူတို့ချင်း အတည်ယူလိုက်ပြန်လျှင်တော့ နှစ်ဦးစလုံးကံမထိုက်တော့ဟုဆိုပါသည် ဘုရား။
တပည့်တော်မကို ကာမေသုမိစ္ဆာအကြောင်းလေးအသေးစိတ်ဟောပြပေးပါ ရန် လေးစားစွာလျောက်ထားအပ်ပါသည် ဘုရား။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 7:33 PM No comments:
သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် ပြန်လည်ရိုက်နှိပ်ရန် လိုအပ်သော ကျမ်းစာအုပ်များတွင် ဓမ္မပဒ ၀တ္ထုတော်ကြီးသည်လည်း တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်လေရာ ယင်းဓမ္မပဒ၀တ္ထုတော်ကြီး၌ အတွဲအားဖြင့် ငါးတွဲပါရှိပါသည်။
ဓမ္မပဒပါဠိတော်သည် ပိဋကသုံးပုံ နိကယ်ငါးရပ်တွင် ခုဒ္ဒကနိကယ်၌ ပါဝင်သော ကျမ်းစာဖြစ်ပါသည်။ ဓမ္မပဒဟူသည်- (ဓမ္မ=တရားတော်တို့ ၏ + ပဒ=အပေါင်းအစု၊ တရားတော်အပေါင်းအစု) ဟုအဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 7:32 PM No comments:
ရဟန်းကို ဘာကြောင့် ရိုသေလေးစားရှိခိုးထိုက်တယ် ဆိုတာကို ဗုဒ္ဓက မုနိ သုတ်တော် မှာ ဒီလို အသိပေး ဆုံးမခဲ့ပါတယ်။…
ကိုယ်…့ဟာကို တရားကျင့်ပြီး အနာဂါမ်ဖြစ်နေတဲ့ အရိယာ လူပုဂ္ဂိုလ် ကတောင် ဒီကနေ့မှာ သင်္ဃန်းဝတ်ထားတဲ့ ပုထုဇဉ် ကိုရင်လေးကို ရှိခိုးရမယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 7:30 PM No comments:
ကဿပမြတ်စွာဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန် စံသွားလို့ သာသနာတော် ကျန်ရစ်တဲ့ အချိန်လေးမှာ
သာသနာကြည်ညိုတဲ့ မိသားစု တစ်စု သာသနာဘောင် ၀င်လာခဲ့ပါတယ်။ အကိုကြီးရဲ့ နာမည်က
“ သာဂတ ” တဲ့။ သူ့ညီရဲ့ နာမည်က “ ကပိလ ” တဲ့။ နှမလေးရဲ့ နာမည်က “ တာပနာ” တဲ့။ အ
မေကြီးကတော့ “သာဓိနီ” ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ သာသနာဘောင်ကို မိသားစုလိုက် ၀င်လာကြပါတယ်။
သာသနာဘောင် ၀င်လာတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်း ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်း လုပ်ရမယ့်အလုပ် (၂) ခုရှိပါတယ်။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 7:29 PM No comments:
ကျေးဇူးရှင် လယ်တီ ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ မဟာသရဏဂုံတော်ကြီး ကျေးဇူးရှင် လယ်တီ ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည် သက္ကရာဇ် (၁၂၇၉)ခုနှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း (၁)ရက်မှ တပေါင်းလကွယ်နေ့ အထိ မုံရွာမြို့အနီး ကြီးတွင်းကြီးတော ရတွင် ”မဟာသရဏ ဂုံတော်ကြီး”ကို (၅)လတိုင်တိုင် နေ့စဉ် မပြတ်ပူဇော်ခဲ့ရာ အကြိမ်ပေါင်း (၂၁၁၆၈ဝဝ) ၂သန်းကျော်မျှ အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 7:28 PM No comments:
ပဋိစ္စ သမုပ္ပါဒ် ဒေသနာဆိုသည်မှာ - ၁။ သံသရာ၏အစကိုလည်းကောင်း သမုတိသစ္စာအလိုအားဖြင်. ‘လူ’ဟူ၍လည်းကောင်း ၊’ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တ၀ါ’ ဟူ၍လည်းကောင်း သမုတ်ကြသူတို.၏ဖြစ်ရာ အစ သည် (အ၀ိဇ္ဇာ နှင်.တဏှာ )ဟူ၍ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ ပေါ်လွင်ထင်ရှားစေခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 7:27 PM No comments:
သောတာပန်ဖြစ်ဖို. ဒိဋ္ဌိနဲ. ၀ိစိကိစ္ဆာကို အမြစ်ပြတ် ပယ်နိုင်အောင် ကြိုးစားရမှာဆိုတော. ၀ိစိကိစ္ဆာအကြောင်းကိုလည်း ဂဃဏန သိဖို.လိုအပ်တယ်။ သိမှပယ်နိုင်မယ်။ ပထမသိအောင်လုပ်ကြဦး။
ဥာတပရိညာနဲ. ဒိဋ္ဌိ၊ ၀ိစိကိစ္ဆာကင်းမှ ပွားများအားထုတ်တဲ.အခါမှာ အားရှိတယ်။ အဲဒီဝိစိကိစ္ဆာ ကင်းရှင်းဖို.လည်းပဲ လေ.လာရတယ်။ မှတ်သားရတယ်။
၀ိစိကိစ္ဆာဆိုတာ ယုံမှားခြင်းကိုဆိုလိုတာ။ ဒိဋ္ဌိနဲ.တွဲနေတယ်။ အားလုံး(၈)မျိုးရှိတယ်။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 7:26 PM No comments:
မေတ္တာဟာ မိမိရဲ.သန္တာန်မှာ ပင်ကိုယ်က ရှိနေပေမယ်.လို. လေ.ကျင်.ပေးမှ အစွမ်းထက်မယ်၊ မလေ.ကျင်.ရင် အစွမ်းမထက်ဘူး။
အဲဒီတော. မေတ္တာဆိုတဲ. သဘောတရားကို ဘာနဲ.လေ.ကျင်.ရမလဲ၊ အာရုံနဲ.ပဲ လေ.ကျင်.ရမယ်။ စိတ်တစ်ခုကို ထက်မြက်လာအောင် လေ.ကျင်.ချင်ရင် အာရုံနဲ.လေ.ကျင်.ရမယ်။ ဓားထက်အောင် ဘာနဲ.လုပ်ရမလဲ၊ ကျောက်နဲ.သွေးရတယ်၊ ကျောက်ပေါ်တင်ပြီးသွေးမှ ဓားထက်တယ်။ ထို.အတူပဲ ဒီ မေတ္တာစိတ်ဓာတ်လေးဟာ ခိုင်မာကြီးထွားလာအောင် ဘာနဲ.လုပ်ရမလဲ၊ အာရုံပေါ်တင်ပြီးတော. လေ.ကျင်.ရမယ်။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 7:24 PM No comments:
လူတိုင်းလူတိုင်း ခံစားနေရတဲ့ ဒုက္ခ ( ၇ ) မျိုးမှာ= (၁) ဒုက္ခ ဒုက္ခ။ (၂) ၀ိပရိဏာမဒုက္ခ။
(၃) သင်္ခါရဒုက္ခ။ (၄) ပဋိ စ္ဆန္နဒုက္ခ။ (၅) အပ္ပဋိ စ္ဆန္နဒုက္ခ။ (၆) ပရိယာယဒုက္ခ။ (၇) နိပ္ပရိယာယ
ဒုက္ခ တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
(၁) ဒုက္ခ ဒုက္ခ = =
ကိုယ်ထဲမှာ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း စသည်ဖြင့် အခံခက်တဲ့ ကိုယ်ဆင်းရဲကတစ်
မျိုး၊ စိတ်ထဲမှာ စိတ်ပူခြင်း၊ စိတ်ညစ်ခြင်း၊ နှလုံးမသာခြင်း၊ ၀မ်းနည်းခြင်း စသည်ဖြင့် အခံခက်
တဲ့ စိတ်ဆင်းရဲကတစ်မျိုး၊ ဒီ ကိုယ်ဆင်းရဲနဲ့ စိတ်ဆင်းရဲကို ဒုက္ခ ဒုက္ခလို့ ခေါ်ပါတယ်။ သူ့သ
ဘောကလည်း အခံရခက်တဲ့ ဆင်းရဲပဲ။ သူ့အမည်ကလည်း ဒုက္ခဆင်းရဲပဲ။ ဒါကြောင့် ဒုက္ခဒုက္ခ
လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဆင်းရဲသဘောရှိတဲ့ ဆင်းရဲတဲ့ ကိုယ်ဆင်းရဲ စိတ်ဆင်းရဲကိုတော့ လူတိုင်းလူ
တိုင်းက ကြောက်ကြပါတယ်။ ကိုယ်ထဲစိတ်ထဲ၌ မခံသာတဲ့ ဆင်းရဲကို ဒုက္ခဒုက္ခလို့ ခေါ်ပါတယ်။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 7:23 PM No comments:
……………………..……………………..……………………..…. “သမဏဖြစ်စေ ဗြာဟ္မဏဖြစ်စေ နတ်ဖြစ်စေ မာရ်နတ်ဖြစ်စေ ဗြဟ္မာဖြစ်စေ လောက၌ မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ပင်ဖြစ်စေ သေခြင်းသဘောကို ”မသေစေအံ့”ဟု တာဝန်ခံနိုင်သူ တစ်စုံတစ်ယောက်မျှ မရှိပေ။”
( ပါဋိဘောဂသုတ်၊ ဗြဟ္မဏ၀ဂ်၊ စတုက္ကနိပါတ်၊ အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော်။)
သင့်ဆီက သင့်မေမေ ဘာတွေလိုအပ်နေလဲ သင်သိသလား???
“သား အမေ့ကို ငါးရိုးလေးနွှင်ပေးပါလား အမေ မမြင်ရလို့…”
အမေစားနေတာလဲကြည့်ပါအုံး ထမင်းလုံးတွေကအောက်ကျလုိ့ ဂရုစိုက်မှပေါ့အမေရ….”
ထမင်းဝိုင်းမှ အမေအိုကြီး၏ အကူအညီတောင်းသံသည် သားဖြစ်သူ၏
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 7:22 PM No comments:
သီလပျက်နေသောသူတို့ကို ပေါင်းသင်းမိသောအခါ၌ မိမိလည်း သီလပျက်လာတော့သည်။ အရက်သမားနှင့်ပေါင်းတော့ အရက်သောက်မိမည်၊ ဖဲသမားနှင့်ပေါင်းတော့ ဖဲရိုက်တတ်မည်၊ မကောင်းသောအမျိုးသမီးတို့ကို လိုက်စားပျော်ပါးတတ်သောသူတို့ကိုပေါင်းသင်းမိတော့ မိမိ လည်းပျော်ပါးမိသွားမည်။ မိမိက မလုပ်လျှင်လည်း သီလပျက်စီးနေသောစကားများကို နားထောင်နေရမည်။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 7:21 PM No comments:
၁။ပဋ္ဌာန်းတရားဟောကြားသူ = ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား။
၂။ပဌာန်းတရား ဟောကြားရာအရပ်ဒေသ = တာဝတိံသာနတ်ပြည်။
၃။ပဌာန်းတရားဟောကြားရခြင်းအကြောင်းရင်း = မယ်တော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးသော သန္တုဿိတနတ်သားကို ကျေးဇူးဆပ်ရန်။
၄။ပဌာန်းတရားကို ဦးစွာနာကြားကြသူများ =သန္တုဿိတနတ်သားနှင့် အနန္တစကြဝဠာအတွင်းရှိ နတ်ဗြဟ္မာများ။
Posted by ဥတ္တရအလင်း at 7:19 PM No comments:
ဗုဒ္ဓဟောကြားသော လူတိုင်းအတွက် ဘ၀ခရီးလမ်း ရွေးချယ်ရာ...
အရဟံ ဇယံ ဘုရားရှိခိုး(အံ့သြဘွယ်တန်ခိုးထူးဘုရားရှစ်...
လက်ဆောင်ပေးတဲ့ အထဲမှာ အကောင်းဆုံး လက်ဆောင်ဆိုတာ ဘာ...
ရဟန္တာဖြစ်လျက် ဆွမ်းတစ်နပ်မှ ၀အောင် မဘုန်းပေးရခြင်း...
.” သတိထားဖွယ်ရာ အမျိုးသမီးများနှင့် ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ...
“ ငါက ပိဋကတ်သုံးပုံဆောင် တိပိဋကဓရ ” တဲ့ (ကပိလ သုတ္တ...